Ozi ụlọ ọrụ |
IPL laser wepụ ntutu
Mwepụ ntutu DIODE LASER
808 Diode Laser+Yag Laser
Q Gbanwee Nd: Yag Laser
Igwe ihe osise Picosure
1064nm Laser Long Pulse Laser
Ezé Ịcha Ọcha
Mweghachi akpụkpọ ahụ
Mmezi ọgwụgwọ anụ ahụ
Ọkpụkpụ akwara HI-EMT
Ultrasound nke ShockWave EMS
HIFU SMAS Ihu Slim Slim
Igwe Ugboro Redio
RF nke ultrasound
RF Cavitation agụụ
RF Microneedle Fractional
Igwe Igwe Jetị
Mwepụ nke Spider Veins nke 980nm
980nm Iwepụ Vascular Didoe Laser
Ugboro ugboro RF mwepụ ududo
Ịwa ahụ Laser
Ịwa ahụ+ Fractional
Ịwa ahụ + Nkera + Nwanyị
Ndozigharị akpụkpọ ahụ na -ebuli ihu
Enyo nyocha anụ ahụ
Akwụkwọ Derma Pen
AHỤ NA -ECHI
Cryolipolysis na -ajụ oyi
Vashape Roller RF
ỤLỌ NA -eji Ngwa mma
Ihu mgbochi ịka nká
Ịhịa aka n'ahụ
NKWUKWU NKE PỤTARA
IPL na -edozi iwepụ ntutu
Mwepụ Tattoo YAG Laser
CPC jikọọ nkwụnye na kwụpụ
A-Otu Nnwale Ahụ Otu
AKWỤKWỌ RF VACUUM ULTHRASOUND
Ibuli ihu ihu Theramge RF
808+1064+755NM DIODE LASER
IPL LASER XENON LAMP
Ihe osise Derma Pen
RF na -ama jijiji
Ọbịbịa Ọhụrụ -CaVstorm Cavitation 3.0 igwe mma ụdị ahụ
site na nchịkwa na 21-09-16
Oké ifufe BIO & Photon, Vacuum & RF na Vacuum & Cavi so na teknụzụ kachasị ewu ewu .njikọ ọnụ maka imezi ahụ, mee ka akpụkpọ ahụ sie ike na ịkpụ ahụ. Nchọpụta ahụ nwekwara mwepụta ọkụ nke ọkụ LED na -acha ọbara ọbara, nke nwere ike igbari abụba na ahụ ịhịa aka n'ahụ, ma mee ka metabolism dị ngwa na sterilaiz ...
Kedu ihe dị iche n'etiti ipl nwere 808nm diode laser ịwepụ ntutu?
OPT IPL Laser Removal Hair VS 808NM Diode laser wepụ ntutu isi ọkụ Isi mmalite: IPL (Nnukwu Pulse Light) Isi mmalite ọkụ: 808nm diode laser mwepụ ntutu Spectral Range: Width Spectral (640-1200nm) & DPL Warara Spectral (610-950nm) Njirimara: Spectral mgbasa ozi anwuru ọkụ na ntutu mwepụ ...
755+808+1064nm Diode Laser Iwepụ ntutu
site na nchịkwa na 21-03-19
Ejiri aka nwere ogologo ogologo 3: Alex 755nm, ọsọ 808nm na ogologo.pulse1064nm 755nm: Ọfụma dị mma maka ntutu na -acha ọbara ọbara, ntutu dị mma Ọsọ 808nm: Ogologo nrịgo ọla edo maka ụdị ntutu niile.
Onye nnọchi anya Israel bịanyere aka ọhụrụ maka Ngwaọrụ ọgwụgwọ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ - Iwu izizi nke nkeji 100
site na nchịkwa na 21-02-26
Na-adịghị emerụ ahụ. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ. Ụdị ụdị 7 ụdị 1-625nm Red mode 2—415nm Blue Mode 3- 520nm Green Mode 4—625nm Red + 415nm Blue Mode 5—625nm Red + 520nm Green Mode 6—415nm Blue + 520nm Green Mode 7—625nm Red + 415nmBlue + 520nm Green Intelligent akara pa ...
Ị maara na HIEMT kacha ọhụrụ nwere isi anọ na -arụ ọrụ?
site na nchịkwa na 21-02-23
1.Irụ ọrụ naanị na abụọ nwere ike ịhọrọ na uche 2. Ụdị nkwụnye, nhazi isi na-arụ ọrụ dị mfe ma kwụsie ike. 3. isi 4 na -arụ ọrụ, hanldes abụọ na -arụkọ ọrụ, gbakwunyere isi na -arụ ọrụ maka ogwe aka na ụmụ ehi, na -enye ohere ọgwụgwọ maka afọ, isi, ogwe aka na apata ụkwụ na iwuli akwara ahụ! 4 ....
China EM Sculpt HIEMT Isi Slimming Machine na -emepụta, onye na -ebubata ya, Zohonice.
site na nchịkwa na 20-09-07
HI-EMT (Onye na-enye akwara akwara ike dị elu) bụ teknụzụ ọgwụ a na-eji na ọgwụ ịchọ mma. Ọ na -eji mpaghara elektrọnik lekwasịrị anya nwere ọkwa siri ike. Ogige electromagnetic na-agafe ahụ na-adịghị emerụ ahụ ma na-ejikọ ya na neurons moto nke mechara ...
Kedu ka m ga -esi ahọrọ igwe mwepụ ntutu?
A: Banyere akụrụngwa iwepụ ntutu laser, ndị mmadụ na -atụnyere ya ugboro ugboro na nhọrọ IPL/DIODE Laser. Kedu ihe dị iche n'etiti ngwaọrụ sistemụ abụọ a? Otu esi ahọrọ? Anyị atụnyere ngwaọrụ abụọ na teknụzụ ma edepụtara ya ... Reference --- IPL VS DIO ...
Ọhụrụ kachasị amasị mwepụ egbugbu - laser Picosure! Kedu ihe bụ picosure laser?
PicoSure bụ nke izizi na naanị laser ihe ịchọ mma picosecond kpochara. N'ịghọta dị ka ihe nrịba ama na mwepụ egbugbu, PicoSure ga-enyere gị aka ime ngwa ngwa hụ akpụkpọ ahụ na-enweghị ink. Ọbụna agba ink siri ike dị ka blues na elu, yana tre ...
Ọbịbịa Ọhụrụ - Cavstorm Cavitation 3 ...
Kedu ihe dị iche n'etiti ipl na 808nm ...
Echiche banyere Frequency Redio maka ibuli akpụkpọ ahụ ...
Ọgwụgwọ Ọkpụkpụ Skincare Ọma Penetra ...
Mgbe mgbatị ahụ gasịrị, ị kwesịrị ị were nke ka mma ...
800Miter South 2Village LangFa, HuangCui Town, Daxing District, Bejing